Obbo Shimallis Abdiisaa: "Oromiyaan yeroo ammaa nagaa keessa jirti, yakkis hir'ateera" - BBC News Afaan Oromoo
Namootni humnootii nageenyaan qabamanii iddoowwan garaagaraatti hidhaarra jiran duula namoota caasaa mootummaa diiguu, nagaa booressuu fi namoota ajjeesan to'achuuf taasifamen to'annoo jala oolan jedhan pireezidantii itti aanaan Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa.
Bara haaraa sababeefachuun Obbo Shimallis Abdiisaan miidiyaaleef ibsa Sambata kennan irratti kana kan jedhan.
Nageenyaa Naannoo Oromiyaa ilaalchisee "Oromiyaan yeroo ammaa nagaa keessa jirti yakkis hir'ateera" kan jedhan Obbo Shimallis "nuyi miseensa paartii hin hiine osoo ummatni rakkatuu nuti asitti marii jennee hin taphannu" jedhan.
Namootni balleessaan irratti hin argamne jala jalaa hiikkamaa akka jiranis himaniiru.
'Qaama seeraan ala hidhatee socho'u ni dhabamsiifna' - MNO
Wantoota afur bulchaan Naannoo Oromiyaa gaafatan
Namoota seeratti dhiyaachuu qaban qofa seerratti akka dhiyeessan fi qaamolee hidhatanii socho'anis bara 2012'tti naannicha keessaa akka dhabamsiisan himan.
ABOn Obbo Daawud Ibsaan hogganamu "qaamoleen hidhatanii socho'oan kunneen miseensa keenya miti, shiftaadha, nuyiinis hin hogganamu jedhee waliigaltee nuf mallatteessee jira" jedhaniiru Obbo Shimallis.
Gara fulduraattis nageenya naannichaa mirkaneessuuf mootummaan xiyyaaffannoon akka hojjetu dubbatan.
'Moyyaleerraa hanga Cinaaqsan karaan hunduu saaqameera'
Dhimma Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon walqabatee adeemaa jiru irratti ejjennoon mootummaa heera biyyattii qofa kan bu'ureeffate jedhan.
Gareen lachuu rakkoo jiru mariidhaan akka hiikanis marii abbootii amantaa waliin taasisan irratti yaada dhiyeessuu isaanii dubbatan.
Ejjennoon mootummaan naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee irratti qabu heera biyyattii kan bu'ureeffate ta'uu fi kanaafis hojjetamaa akka jiru himan.
Akka fakkeenyaattis magaala Finfinnee keessatti bara barnootaa 2012'f barattoonni 47,000 ta'an Afaan Oromootin barachuuf galmaa'u isaanii dubbatan.
Gama biraatin, "ibsi ejjennoo koreen Paartii Dimokiraatawaa Amaaraa (ADP) magaala Finfinnee tibbana baase ADP kan bakka bu'u nutti hin fakkaatu" kan jedhan Obbo Shimallis "koreen kun hojii ADP hojjechuu malee dhimma Finfinnee irratti ibsa kennuf aangoo hin qabu" jedhan.
Kana malees, wanti ibsa baasun jijjiiramu akka hin jirre dubbatan.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuun walqabatee kan gaafataman preezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa walin hojjechaa akka jiran himan.
Afaan hojii federaalaa ta'uun Afaan Oromoo akka biyyaatti faayidaa kan qabu ta'us mirgi ummata bal'aas kabajamuu akka qabu himan.
Akka fakkeenyaattis rakkoo jiraattota Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinneetti tajaajilamuf irra gahu kaasan.
"Afaan Oromoo qofa osoo hin taanee afaan birootis afaan hojii federaalaa ta'u qabu," kan jechuun Obbo Shimallis ibsaniiru.
Obbo Shimallis Afaan Oromoo manneen barnootaa naannolee ollaa keessatti akka baratamuf naannoolee garaagaraa waliin waliigalteerra gahamuu fi hojiitti seenamuu isaa himan.
Mootummaan naannichaa weerara lafaarratti araara akka hin qabne kan dubbatan Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansi sadarkaa federaalaa hanga sadarkaa gadii jiru gochaa weerara lafaa irratti hirmaachaa turuu himan.
Angawootni sababa kanaan aangorraa kaafamaniifi seeratti dhiyaachuu isaanii akkasumas hojiin seeratti dhiyeessuu cimee akka itti fufu dubbatan.
Gama biraatin maatii 170,000 Finfinnee keessaa buqqa'anii eenyummaa fi jireenya isaanii dhabuu isaanii kan yaadachisan Obbo Shimallis "ammaan booda Finfinneen nama tokkoyyu hin buqqistu" jedhan.
Qormaatawwan bulchiinsa MNO shanan
Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessatti qormaatawwan hedduun qoramee bu'aa argamsiise jedhu Obbo Shimallis Abdiisaan.
"Bara 2011 qormaatawwan gurguddoo shantu nu mudate," jechuun dubbatu.
''Hooggansi jijjiramicha hubachuu dhabuu, qaamoleen jijjiramichii taphaan ala taasise rakkoo uumuu, paartiileen siyaasaa barmaatii darbe keessaa bahu dadhabu, ilaalchota finxaaleyyii ummataaf ummata gidduutti wal jibbiinsa fi walitti bu'iinsa uumuuf taasisaa turaniifi hoji dhabdummaadha,'' jedhan.
"Qormaatawwan kunneen miiraan osoo hin taane ilaaf ilaameedhaan dandamachun fulduratti adeemaa turre qormaatawwan kunnen darbuufis namootni heddu aarsaa ta'aniiru," jedhan Obbo Shimallis.
Kana malees, naannoleen mirgi ofin of bulchu isaanii sarbamaa fi dhimmoota isaanii keessa seeraan ala seenamaa turuu kan himan Obbo Shimallis rakkoolee gama federaalizimiin jiran hiikuuf hojjetamuu himu.
Kanaanis, Naannoo Amaaraa, Somaalee, Benishaangul, Affaar fi kanneen biro walin marii taasifameen naannoleen akka diinaatti wal ilaalaa turan gara walitti dhufeenya fayyaalessaatti ce'uu dubbatan.
Ammas hammeentaan hojjettoota mootummaa dhaabbilee federaalaa keessa jiranii akkasumas qoodinsi qabeenyaa fi aangoo bifa qixaawaa ta'een akka jiraatuf ni hojjenna jedhan.
Rakkoo hojii dhabuu lammilee furuf bara 2012'tti xiyyeeffannaan irratti akka hojjetan kan himan Obbo Shimallis, rakkoon amma jiru qarshii ramaduun qofa hin furamuu jedhu.
Kanaafis, tarsiimoo qonna fi baadiyyaa irratti xiyyeeffate hojiirra oolchuun ummata bal'aa fayyaduuf socho'aa akka jiran dubbataniiru.
Kana milkeessuufis sochiin maallaqaa gara baadiyyaa akka ga'uufi dhaabbileen faayinaansii qonnaan bultootaaf liqaafi haalota garagaraa akka mijeessan gochuuf irratti hojjetama jedhan.
Obbo Shimallis Abdiisaa: 'Moyyaleerraa hanga Cinaaqsan karaan hunduu saaqameera'
Mootummaa Naannoo Oromiyaa: 'Qaama seeraan ala hidhatee socho'u ni dhabamsiifna'
2 Fuulbana 2019